Maqaal: Golaha wakiiladu ma waxay Noqdeen Niman sharcidaro iyo kala danbayn la'aan u hor seeda wadanka
Maqaal:Golaha wakiiladu ma waxay Noqdeen
Niman sharcidaro iyo kala danbayn la'aan u hor seeda wadanka
Waxa aan halkan kasalaamaya dhamaan saxaafada madax banana waxa aan rabaa in aan halkan ku cabiro ra'yigayga hadii aan ku soo dhawaado fikirkayga.
Sida aynu wada ognahay Golaha wakiilada waxa loo doortay in ay shacabkii soo doortayay ka turjumaan himiladoodaiyo rabitaankooda hadaba waxay noqotay in ay nodeen qaar lagu khasaaray oo xukuumadu hadba siday doonto u adegsato siiba sharcidarada iyo burburinta qaynunuka wadanka, oo ay ku sifibeen in ay maalin ninka muraad leh gacanta u dhiibaan iyaga oo maslaxadii shacabka iyo tii wadanka iyo sharcigiiba ay dhaafsanayaan aduunyo.
Waxa kele oo layaab leh in ay sharcidarada ay ku midoobeen waxa ka mida ah sharcidarada uu Golaha wakiiladu ay ku midoobeen in ay gudoomiyaha golaha c/raxmaan ciro maaliba waxa uu soo jeediyo ee isaga maslaxadi ugu jirto ay ku taageeraan sharcidarada GOluhu isku raacay waxa weeye in Gudoomiye Golaha wakiiladu sifa kasta oo sharcidaro oo uu isagu xisbigiisa wadani ku ilaashanyo iyo tan baarlamanka a y qalinka uguduugaan.
Hadii aanu nahay shacabka reer soomaaliland xagay joogtaa cadaalada dhigaysa in ay xukuumadu ay xisbiga wadani lashaqayso xisbiyadii kelana la dgaalantowaxayaalaha oo dhami waxay tilmaamaysa inaanay doorasho xor iyo xalali ka dhacayn wadanka, hadaba waxa lays wadiinayaa shacabkii shacidarada ka jirta wadanka in dhaha ma ku hayaan mise waa lax dhukani abaar a,og, shacabka rer soomaaliland waxa aan leeyahay hurdad ka toosa oo wax hay diin kordhaan.
Hadii kele mar walba dib u dhac ayuubu wadanku sii gelidoona, Golaha wakiiladana waxa aan leeyahay umada ayaa idin arkaysa oo cokoodii ayaad meesha ku fadhidaan taariikhduna way idin qori doontanin waliba waxa uu umada uqabtay taas ayuunba nin walba diiwaanka u gu jirta,xukuumada waxa aan leeyahay waa in ay faraha kala baxdaa xisbiyada mucaaridka ahi ay u sinaadan ee aanay mindna dhinaca saarin, sida ka muuqata imika ee ay xisbiga wadani u wdadato,
Ql/khaddar jirde Axmed